Quartet, nke Soledad Puértolas dere
Gburugburu bụ izu oke, njem nke nloghachi, enweghị ngwụcha mechara. Ogige ahụ kwesịrị ntụkwasị obi karịa ndụ n'ezie. Geometry ka dị nso na izu oke a chọrọ mana na njedebe nke ụbọchị ya na akụkụ ya na -enweghị atụ. Soledad Puértolas na -ewetara anyị quartet a, ...
Ijide elu igwe, nke Cixin Liu dere
Agụrụ m na nso nso a na nnukwu mkpọtụ nwere ike ọ gaghị abụ mmalite nke ihe mana njedebe. Nke anyị ga -eji chọta onwe anyị na ndekọ ikpeazụ nke nchịkọta egwu nke Eluigwe na Ala. Ajụjụ maka ndị edemede akụkọ sayensị dị ukwuu nke afọ ọ bụla bụ ịhụ njedebe nke echiche ...
Nnụnụ n'ọnụ na akụkọ ndị ọzọ, nke Samanta Schweblin dere
Ezi akụkọ nwere ike ịdị ogologo dịka egwu. Samanta Schweblin na -eme akwụkwọ nyocha nke obere ndụ yana egwu egwu nke ọnọdụ ha. Akụkọ Samanta na -akpọte ụda egwu na -enweghị ngwụcha nke ihe ụtọ na ebe nchekwa. Ihe fọdụrụ, ihe ga -agagharị dị ka nkuzi mgbameji ...
Ka anyị rie na Black Friday, nke Nana Kwame Adjei-Brenyah dere
N'agbata ugbu a na ụbọchị na -adịbeghị anya, ụbọchị ọhụrụ ọ bụla ga -abụ ohere ọhụrụ ịnụ ụtọ ezigbo oriri nke enweghị isi na nke enweghị atụ. Ọ bụ ihe gbasara ịkpọ aha oge anyị dị ka onyinye. Isi okwu ya bụ na Nana Kwame Adjei-Brenyah (ikekwe otu ụbọchị ọ ga-ekpebi ịkpọ onwe ya site na akara, ...
Mgbanwe nke ndụ, nke Xavier Sardà dere
Ezi akwụkwọ akụkọ dị mkpirikpi dịka nke ezigbo Xavier Sardà chịkọtara ebe a anaghị afụ ụfụ. Ihe kacha mma gbasara akwụkwọ akụkọ dị mkpirikpi bụ na yarn ahụ abụghị ihe doro anya nke ọma. N'ihi na anyị nwere ike chepụta usoro efu n'onwe anyị. Dị ka nke a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ niile ...
3 akwụkwọ kacha mma nke Alberto Chimal dere
Enwere ndị na -abịa obere akwụkwọ wee nọrọ. Ọdachi nke onye edemede akụkọ dị mkpirikpi dị ka ọ bụrụ na Dante achọtabeghị ụzọ ọ ga -esi pụọ na hel. N'ebe ahụ Dante nọrọ n'otu akụkụ yana Chimal n'akụkụ ya, dị ka a ga -asị na ọ masịrị ya n'ụdị ahụ dị ịtụnanya ...
Ndakpọ na Edge nke Galaxy, nke Etgar Keret dere
Pụrụ iche na nkenke, dị ka ọtụtụ ndị ọzọ na -akọ akụkọ taa dị ka Samanta Schweblin onye enwere ike ịhụ ya na nkwekọrịta, ezigbo agadi Etgar Keret na -ewetara anyị oke akụkọ na -akpaghasị ihe na mbụ bụ mmepe okike ya. . Gbanwee isiokwu,…
Obodo uzuoku, nke Carlos Ruiz Zafón dere
Ọ baghị uru iche echiche banyere ihe fọdụrụ ịgwa Carlos Ruiz Zafón. Ole mkpụrụedemede agbachiri nkịtị na ole ihe ọhụụ ọhụrụ na -arapara na limbo ahụ dị ịtụnanya, dị ka a ga -asị na furu efu n'etiti shelves nke ili akwụkwọ. Na obi ụtọ na mmadụ furu efu n'etiti paseeji ...